AHOANA NY FOMBA HAMORONANA BOT VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Ahoana ny fomba hamoronana bot VKontakte
Ny fomba iray ahafahana mampifanaraka ny rafitra miasa aminao dia ny manova ny efitrano fidirana. Ireo mpampiasa amin'ny hetsika tsotra dia afaka mametraka ny sary izay tiany, ary amin'ny fotoana rehetra hamerenana indray ny zava-drehetra.
Ny fanovana ny sary miainga amin'ny Windows 7
Ny mpankafy ny fanitsiana ny rafitra fiasan-draharaha ho an'ny tenany dia tsy hanadino ny fahafahana hanoloana ny anton-kevitra ankapobeny miaraka amin'ny sary mahaliana kokoa. Azo atao amin'ny Windows version maoderina sy maoderina, anisan'izany ny "fito". Izany dia azo atao miaraka amin'ny fanampiana ireo fitaovana manokana ary amin'ny fomba maro. Ny safidy voalohany dia matetika haingana sy mora kokoa, ary ny faharoa dia mifanaraka amin'ireo mpampiasa matoky fa tsy te hampiasa rindrambaikon'ny rindrambaiko.
Alohan'ny fisafidianana fomba iray dia manolo-tena ny mikarakara ny fametrahana rafitra fanarenana sy / na bootable USB flash.
Ahoana no fomba hamoronana teboka mamerina amin'ny Windows 7
Ahoana ny fomba hamoronana flash drive USB iray mirefotra
Fomba 1: Windows 7 Logon Background Changer
Araka ny hevitr'ilay anarana, ity programa ity dia natao manokana ho an'ireo mpampiasa ny "fito" izay te hanova ny fiarahabana hiarahaba azy. Ity rindrambaiko ity dia manana endrika tsotra, tsara ary maoderina ary omena sary vongana vitsivitsy.
Download Windows 7 Logon Background Changer amin'ny tranonkala ofisialy
Mandehana any amin'ny tranonkala ofisialin'ny programa ary tsindrio ny bokotra. "Download".
Ao amin'ny pejy vaovao tsindrio ny rohy "Tsindrio eto raha hanomboka ny download".
Ny solosaina zip-download dia mijanona mba handraisana sy hampandehanana ny rakitra exe. Ny fandaharana dia tsy mitaky ny fametrahana sy miasa ho toy ny portable.
Eto ambany ny kitapom-bolongana izay azonao asoloana ny sary natiora. Raha tianao, dia afaka mijery ity lisitra ity ianao amin'ny alalan'ny horonana ny kodiaranao (manandratra) ary mihemotra (aoriana).
Rehefa mikitika ny sary tianao ianao, dia hahita ny fijerin'ny zavatra hitranga ao aorian'ny fiovana.
Raha ilaina dia tsindrio ny bokotra "Sarimihetsika feno" - Izany dia ahafahanao mijery ny sary eo amin'ny efijery manontolo.
Afaka mampihatra ny safidinao amin'ny bokotra ianao "Ampiharo".
Raha te-hametraka ny sarinao manokana ianao, fa tsy ny iray soso-kevitra amin'ny programa, tsindrio ny bokotra "Fidio ordinatera".
Ny Explorer dia manokatra ny toerana tokony hametrahana ny lalana mankany amin'ny rakitra.
Ny rakitra voafaritra dia voafaritra amin'ny alàlan'ny bokotra iray "Ampiharo".
Mariho azafady fa afaka averinao averina averina foana ny sary natsangana. Mba hanaovana izany, kitiho "Windows 7 Default wallpaper" ary tehirizo ny valiny "Ampiharo".
Ao amin'ny votoatin'ny programa, azonao atao ny mamerina indray ny lahatahiry fanalahidy, esory ny fanovana ny pikantsary ho an'ny kaonty hafa ary ampio aloka ny lahatsoratra ao amin'ny rindrambaiko rindrambaiko.
Tsy misy safidy fanampiny amin'ny fampifanarahana ny programa, ka raha te-hanova zavatra hafa ao amin'ny rafitra ianao, ampiasao ireo mpizara multifunctional an'ny Windows 7, izay ahitana ny fahafahana manova ny votoatin'ny download.
Fomba 2: Windows Tools
Tsy afaka manova ny fiarahabana amim-pirahalahiana ianao amin'ny alàlan'ny fitaovana personalization sy ny mpanoratra hafa rehetra, fa afaka manolo ny sary amin'ny alàlan'ny fanovana ny rejisitra ianao ary manolo ny sary ao amin'ny ordinatera. Ny tsy fahombiazan'io fomba io dia ny tsy fahitana ny valiny mandra-panombohana ny solosaina.
Ho an'ity fomba ity dia misy fepetra roa: ny rakitra dia tokony ho ao amin'ny format JPG ary manana lanjany hatramin'ny 256 KB. Ankoatra izany, miezaha hifidy sary mifanaraka amin'ny habeny sy ny famaranana ny efijery anao, mba hahitanao ny kalitaony ary mety.
Sokafy ny rakitra fanontana registry Win + R ary ekiparegedit.
Araho ny lalana aseho eto ambany:
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows Current Version Authentication LogonUI Background
Tsindrio ny dingan'ny parameter «OEMBackground»hametraka ny hasina 1 ary tsindrio "OK".
Raha efa mijoro izany dia mandehana any amin'ny manaraka.
Raha tsy izany, mamorona ity mari-pamantarana ity amin'ny fomba mahazatra. Avy amin'io lalana etsy ambony io, tsindrio ny bokotra ankavanana amin'ny toerana malalaka eo amin'ny ilany havanana amin'ny efijery ary mifidiana "Create" > "Valin'ny DWORD (32 bit)".
Omeo anarany izy OEMBackgroundset value 1 ary tehirizo ny valiny "OK".
Sokafy Explorer ary miverena any amin'ny lahatahiry. fiavianamonina eto:
Amin'ny toe-javatra sasany fiaviana mety tsy ho hita, toy ny ordinatera Info. Amin'ity tranga ity dia mila mamorona sy mametaka anarana amin'ny anaranao 2 folders amin'ny fomba mahazatra.
Voalohany ao anatiny oobe Mamorona tranokala ary manonona izany InfoAo anatin'izany dia mamorona ordinatera fiaviana.
Misafidiana sary mifanaraka amin'ny toro lalana etsy ambony, manaova anarana backgroundDefault ary kopia any amin'ny lahatahiry fiaviana. Mety mila alalana avy amin'ny kaonty administrateur ianao - tsindrio "Continue".
Ny sary voafaritra tsara dia tokony hiseho ao amin'ny ordinatera.
Raha te hahita ny fiovana efa niova, dia avereno indray ny PC.
Ankehitriny ianao dia mahafantatra fomba roa tsotra hanovana ny sary miaina ao Windows 7. Ampiasao ny voalohany raha tsy matoky ny fahaizanao ianao ary tsy te hanitsy ny ordinatera sy ny ordinatera. Ny faharoa dia mety ho an'ireo izay tsy te hampiasa na tsy matoky ny rindranasa rindrambaiko matanjaka, manana fahaizana ampy mba hametrahana ny tantaram-baovao.